Faarax Macallin iin ku taal ayuu cid ku eedaayaa! | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Faarax Macallin iin ku taal ayuu cid ku eedaayaa!
Wareysi wax uu ku sheegay balse ahaa Fadhi ku dirir la duubay oo nin u jiibinayaa warka ka gurayo ayuu Faarax ku eedeeyey Mudane Cabdullaahi Ciise inuu ahaa shisheeye kalkaal u adeega gumeysiga madoow ee itooobiya.
Faarax ayaa soo xigtay buug uu qorey wiil itoobiyaan ah oo uu dhalay wasiirkii arrimaha dibadda ee itoobiya waagaas. Waxa uunna eeda ka dhigay, in Cabdullaahi u dhiibay warqadii go’aanka ee Madaxweyne Aadan Cadde iyo Ra’iisalwasaare Cabdirashiid, oo ahayd in aysan sinna u yeelayn in itoobiya noqoto xarunta midowga Afrika.
Eedaas oo aan si walba haddii loo eego noqonayn mid laga dhigan karo marmarsiinyo waayo Cabdullaahi Gumeysigii Caddaa ayuu Af iyo addinba kula dirirey, waxa uunna horseed ka ahaa gobonnimadii dadka soomaaliyeed.
Haddaba waa kuma Faarax Macallin, Faarax waa nin qaayibay madiidinimada kenyaatiga, waa nin ku qanacsan gumeysiga dhulkiisa lagu haysto, waa nin u adeega u shaqeeya, waa ninkii shalay ku goodiyey soomaaliya ayaan qabsaneynaa, ninka sidaa ah ayaa leh, hebelbaa dalka iyo dadka dhagrey oo shisheeye u adeega!
Aan is weydiine waa maxay sababta aynu colka ulana nahay itoobiya? Saw maaha dhulka gumeysigu u qayday ee ay naga haystaan? Haddaba dhulkeenna NFD ayaa u oggolaaday Kenya? goorma ayay yeelatay? maxayse labada gumeysi ee madoow ku kala duwan yihiin?
Itoobiya intii gumeysigu siiyey ayay weli joogtaa, waxa aanse marag ka nahay in Kenya maanta bad iyo beriba nagu haysato, haddaba isaga oo kuwaas ku abtirsada ayuu Faarax Macallin doonayaa inuu dad dalkan iyo dadkaan naftooda u hurey uu aflagaadeeyo.
Isweydiinta ayaa ah, Faarax ma rumaysan yahay in Kenya gumeysi tahay, sida uu ugu arko in itoobiya Gumeysi tahay?
Dadka degan gobolka soomaaligalbeed wax badan ayay dirireen ilaa maantana halgan bay ku jiraan, yaa arkay Faarax oo halgankaas oo kale wada? Faarax, Aabbihiis, Awoowgiisba waxa ay oggolaadeen in ay ahaadaan madiidin Kenya ku hoos nool.
Cabdullaahi Ciise dalkiisa ayuu halgamay isaga oo madax bannaan oo gob ahna wuu dhintey, balse Faarax isaga oo gun ah ayuu nool yahay isagoo gun ahna wuu dhimanayaa, weligiis inuu calooshiisa u halgamo maahine, dan soomaaliyeed uma halgamin.
Waxaa aan qoraalka ku soo afjarayaa Faaraxoow haddaad gumeysi diid tahay hoostaada iyo hareerahaaga eeg oo hadda kansho ayaad haysataaye dadkaaga heeryada saaran ka qaad, oo nacab Kenya kaaga weyni ma jiree iyada iska celi.
Bulshada soomaaliyeed waa ogtahay qofka aad tahay iyo qofka uu ahaa Cabdullaahi Ciise.
Previous articleBannaabaxyo ka dhan ah Faransiiska oo ka socda dalka ay ku nool yihiin Muslimiinta ugu badan dunida
Next articleQaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha mucaaradka Tanzania oo la xiray
Soo dhaweynta Musharax Xasan Cali Kheyre oo malaayin qof isagu soo...
Soo dhaweynta Musharax Xasan Cali Kheyre oo malaayin qof isagu soo baxday(Daawo Sawirada) Waxaa dhawaan la sugayaa inuu Eraboorka Caalamiga Aadan Cade ka soo Dego...
War deg deg ah Qarax ka dhacay magaalada Muqdisho